Channel ayaa looga dhawaaqay Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulTaariikhda waxaa loo cayimay Kanal Istanbul
16 / 03 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
howlihii mashruuc ee kanaalka istanbul
'Mashruuca Crazy', oo laga filayo rajo-gelin, koox gaar ah ayaa u shaqeysa Kanal Istanbul. Qorshayaasha mashruucan ayaa la xayirayaa bisha May, iyo hindisada ayaa la bilaabi doonaa wixii ka dambeeya bisha Juun.
In kasta oo koox gaar ah laga dhex aasaasay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta diyaarinta qorshayaasha horumarineed, Kanal Istanbul waxaa loo qorsheeyay in la hakiyo bisha May, lana soo gabagabeyn doonaa bisha Juun. Markaa, ma jiri doonto carqalado hindisada ka dib bisha Juun.
MACLUUMAADKA 500 NINKA QARANKA
Wax ka beddelka hore ee qorshaha 1 / 100.000 ee cabbirka Qorshaha Deegaanka ee Kanal Istanbul Reserve Area Area, waxaa la go'aamiyay in la dhiso aag hoose oo cufan oo ay ku badan yihiin naqshadda saqafka ee fikradda deriska kaas oo rafcaan u noqon doona 500 kun oo deggan labada dhinac ee Kanal Istanbul.
Qorshayaasha soonaha cusub, ee kusii soconaya marxaladda qorshaynta, ayaa cadeyn doonta meelaha la dego ee u adeegi doona aagagga la degan yahay, oo ay ku jiraan ganacsiga, xarumaha rasmiga ah, kaabayaasha bulshada, kaabayaasha farsamada, tas-hiilaadka bulshada iyo tas-hiilaadka dhaqanka. Meelaha cusub ee la degi doono, waxaa jiri doona marinno cagaaran oo cagaaran oo bari ilaa galbeed ah, koonfur ilaa woqooyi. Intaa waxaa dheer, aagga kaymaha, tas-hiilaadka xeebaha, aagagga xoojinta bulshada ee magaalooyinka, aagagga cagaaran ee gobollada iyo isboorti, aagga jaamacadda, aagga horumarinta tikniyoolajiyada, aag dalxiis, aag dalxiis caafimaad, goob dalxiis iyo aag caddaalad ah iyo aag saadka, isticmaalka xeebaha Isticmaalayaasha wax qiimo ugu kordhin doona Kanal Istanbul ayaa la qorsheeyay.
In kasta oo loogu talagalay in lagu garaaco qodistii ugu horreysay ee sanadkan ee Kanal Istanbul, oo loo xisaabiyo inay ku kacayso 75 bilyan oo liras, waqtiga dhammaystirka mashruuca ayaa la qorsheeyay inuu noqdo 7 sano. Iyada oo ay weheliso Kanal Istanbul iyo dhismaheeda isku dhafan, ku dhawaad ​​10 oo qof ayaa la rajaynayaa in ay ka shaqeeyaan wejiga diyaarinta mashruuca, 10 oo hawlgal ah, iyo ganacsiyo kale sida kanaal iyo dekeda, xarunta logistics iyo marinada. Wadamo badan, gaar ahaan Russia, China, Netherlands iyo Belgium, ayaa danaynaya mashruuca. (Xigasho: Subax)
Taariikhda Kanal Istanbul ayaa lagu dhawaaqay
Taariikhda dhammaystirka Marmaray
Bursa Tareenka xawaaraha sare ah wuxuu bilaabmaa! Taariikhda waa cad
Taariikhda ay tareenku u raaci doonaan Samsun waa hubaal
Taariikhda mustaqbalka ee tareenka xawaaraha sare leh ee Sivasa
Taariikhda Samsun Tekkekoy Logistics Village ayaa la furay
Qadka Ankara İzmir YHT Line wuxuu Dhamaanayaa Taariikhda La Go'aamiyay!
Taariikhda dhismaha ee Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Trabzon Light
Taariikhda ayaa lagu go'aamiyay tareenka Erzincan-Trabzon
Taariikhda Qandaraaska Ugu Horeeya ee loogu dhawaaqay Kanal Istanbul
Qorshaha Wadada Istanbul ee Qorshaha Wadaagga ayaa la go'aamiyey